कोरोनाले बन्द रहेको रसुवागढी नाका सञ्चालन गरिने…हेर्नुहोस! – Nepal Online Khabar
कोभिड –१९ का का,रण रसुवागढी ना,काबाट ब,न्द व्यापारिक का,रोबार फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सी,मा क्षेत्रका अधिकारी सहमत भएका छन्।
नेपाल र चीन दुई देशका अधिकारीबीच बुधबार अ,पराह्न रसुवागढीस्थित मितेरी पुलमा सम्पन्न वार्तामा स्वास्थ्य प,रीक्षण, सी,मा क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा, क्वारेन्टिन जस्ता व्यवस्थापनबाट का,रोबार अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।
दुवै देशका नागरिक आवतजावतमा भने यथावत् रोक लगाई अब चिनियाँ सवारी साधनले नै मितेरी पुलसम्म मालसामान उपलब्ध गराउने स,हमति भएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिए।
चीनबाट आयात गरिने मालवस्तु दैनिक रूपमा १५ कन्टेनरसम्म रसुवागढीको मितेरीपुलमा ल्याइने छ। नेपाली कन्टेरमा सामान लाद्न को,भिड –१९ नि,यन्त्रण नीतिको मापदण्ड पूरा गरेका कामदार मात्र पठाउन चिनियाँ अधिकारीले आग्रह गरेको बताइएको छ।
एकदिनमा १५–१५ कामदार, चालक र कन्टेनर मात्र मितेरी पुलको सी,मामा पठाउन ती अधिकारीले आग्रह गरेको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए।
केरूङबाट नेपाली कन्टेनरले सामग्री ल्याउने गरेकामा चीनको वुहानमा को,रोना भाइरसको सं,क्रमण बढेसँगै गत माघ १५ गतेदेखि बन्द भएको थियो। को,रोना नि,यन्त्रण नभएसम्म नेपाली ट्रक तथा कन्टेनर केरूङ जान नपाउने जनाइएको छ। सेतोपाटी बाट साभार
Prevहिजो माग्ने अवस्थामा थियौ, आज जनतालाई सहुलियत दिन सक्ने भएका छौ – कुलमान सेयर गरौ !
Nextएमसीसी पारित नगर्न चे,तावनीसहित सांसदको घरघरमा सूचना टाँसियो…हेर्नुहोस!